Qodobo ku Dhaqankooda ay Isla Qaateen Wasaaradda Warfaafinta iyo Saxaafadda Somaliland | Araweelo News Network
Qodobo ku Dhaqankooda ay Isla Qaateen Wasaaradda Warfaafinta iyo Saxaafadda Somaliland
Hargeysa (ANN) Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland iyo saxaafadda dalka, ayaa isla qaatay qodobo salka ku haya ilaalinta qaranimada Somaliland iyo madaxbannaanida xorriyatul-qawlka.
Kulan ballaadhan oo masuuliyiinta Wasaaradda Warfaafintu xaruntooda shalay kula yeesheen wakiillo matalayey saxaafadda Somaliland oo isugu jiray mulkiilayaal, maamulayaal, iyo tifaftirayaal ka kaa socday hay’adaha warbaahinta ee telefishannada, wargeysyada, shabakado internetka ah iyo ururrada ka jira dalka, ayaa lagaga wadahadlay qaababka saxaafaddu uga hawlgalayso baahinta wararka xaasaasiga iyo ilaalinta xuquuqda suxufiga iyo mihnadda uu ka shaqeeyaba.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Md. Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) oo markii uu dhammaaday kulankaasi oo muddo badan qaatay falanqayntiisu la hadlay warbaahinta, una faahfaahiyey go’aamada la iskula qaatay ku dhaqankooda oo si guud salka ugu haya dheelitirnaanta iyo sugnaanshaha wararka saxaafaddu baahiso iyo sidii looga fogaan lahaa wax kastoo waxyeelaya Qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland iyo wadajirka iyo wada noolaanshaha shacabka reer Somaliland.
Wasiir Caddaani oo tiriyey qodobada la isku afgartay, waxa uu yidhi, “Waxa laga wadahadlayey madaxbannaanida saxaafaddu ay leedahay iyo xuquuqda uu leeyahay suxufigu ama saxaafadda Somaliland, waxa kaloo laga wadahadlay danta guud ee Qaranka Somaliland iyo habdhaqanka saxaafadda ee ilaalinta qaranimada iyo nabadgalyada. Waxaanna qodobada aannu isla qaadanay ka mid ah;
1. Inay innaga reebban tahay faafinta fidno qabiil kicin ah.
2. Inaan la baahin, lana qorin war been abuur ah.
3. Inaan ka digtoonaano faafinta ama qorista salaadiin, boqorro, ugaasyo, garraado ama cuqaal ku hanjabaya af-qabiil.
4. In aan iska ilaalino faafinta iyo baahinta wax kasta oo halis ku ah amniga iyo farogelinta ciidammada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland hadday millatari tahay iyo hadday boolis tahay oo hawlgalladoodu arrimo sir u ah qaranka Somaliland yihiin.
5. In baahinta magaca Qabiilka ama beel aan ku bedelno gobol, degmo, magaalo ama tuulo.
6. In isku dhufashada dalalka jaarka ah iyo cilaaqaadka Somaliland la leedahay dalalka jaarka ah la ilaaliyo, lana ilaaliyo in danta Jamhuuriyadda Somaliland ku jirto cilaaqaadkaas.
7. In saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland ay madaxbannaantahay, suxufiga Somaliland uu leeyahay xuquuq gaar ah oo madaxbannaanidaasi uu siisay dastuurka iyo sharciga Jamhuuriyadda Somaliland. Anniguna haddii aan ahay Wasiirka Warfaafinta oo ah wasaaradda qaabilsan saxaafadda, waxaan ilaalinayaa madaxbannaanida saxaafadda iyo suxufiga iyo xuquuqdiisa gaarka ah.”
Hoggaanka ururka SOLJA, xubno mulkiilayaasha iyo madaxda qaar ka mid ah hay’adaha warbaahinta Somaliland oo ka qaybgalay kulankaasi, ayaa soo dhaweeyey go’aamada la isla qaatay oo ay dhankooda ballanqaadeen fulintooda.